एयर होस्टेज बन्ने सपनाले मुम्बई पुर्यायो, मुम्बईले कलाकार बनायो
बिष्णु सुबेदी २०७५ फागुन २३
एयर होस्टेज बन्ने सपनाले उनलाई मुम्बई पुर्यायो । उनले एयर होस्टेज बन्नका लागि प्रयत्न नगरेकी पनि होइनन् । कतार एयरवेज, जेट एयरवेजलगायतमा एयर होस्टेजका लागि पुगेकी थिइन । तर, सफल हुन सकिनन् । त्यही विचमा उनले पार्ट टाइम मोडलिङ गर्थिन । एजेन्सी मार्फत केही शोका लागि उनले पनि अडिसन दिएकी थिइन । तर, त्यहाँ पनि कुनै अवसर पाइनन् । उनी थाकिनन्, अडिसन दिन छोड्दै छोडिनन् । एयर होस्टेज र सुपर मोडल त हुन सकिनन् बरु कलाकार भएर निस्किइन । एयर होस्टेज बन्न मुम्बई गएकी उनलाई मुम्बईले कलाकार बनायो ।
हामी कुरा गर्दछौं चैत्र १ गतेबाट प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘जानी नजानी’की नायिका निरिशा बस्नेतको । निरिशा स्टार प्लसबाट आउने टिभी सिरियल ‘चन्द्र नन्दनी’बाट चर्चामा आइन । मोड्लिङमा सघर्ष गरिरहदा सिरियलका लागि दिएको पहिलो अडिसन जसले उनलाई कलाकार बनायो । अडिसन दिएको डेढ महिना पछि मात्र उनी सेलेक्ट भएको खबर आयो । त्यसको केही दिनमा नै छायाँकन शुरु भयो । निरिशाले पहिलो पटक क्यामरा फेस गरेको यही सिरियलको सेटमा हो ।
बलिउड विश्वका धेरै देशका नागरिकको स्वप्न नगरि पनि हो । त्यहाँ प्रतिष्पर्धा उत्तिकै छ । त्यही प्रतिपर्धाका बिच एउटी नेपाली चेलीले अवसर पाइन । अवसर मात्र पाइनन् उनले त्यसलाई मज्जाले उपयोग गरिन । सायद यसैले होला उनी सिरियल मेकरको आँखामा पर्न सफल भइन । ‘चन्द्र नन्दनी’मार्फत उनको अभिनयलाई धेरैले रुचाए । त्यसैले एकपछि अर्को अफरहरु आउन थाले । तर, आएका सबै अफरलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । यो बिचमा उनी नेपाली चलचित्र ‘जानी नजानी’मा पनि व्यस्त भइन । यद्यपी अब भने फेरी मुम्बई फर्कदैछिन त्यो पनि सिरियलका लागि नै । उनले अर्को एउटा सिरियलमा लिड रोलमा काम गर्दैछिन ।
त्यसो त निरिशाका लागि फिल्मी वातावरण नयाँ थिएन । उनका पिता विश्व बस्नेत नेपाली चलचित्रका प्रसिद्ध कलाकार तथा निर्देशक हुन । जसका कारण निरिशाको रगतमै कलाकारिता थियो पनि भन्न सकिन्छ । अन्य क्षेत्रका व्यक्ति भन्दा चलचित्रकर्मीकै सन्तान छिटो चलचित्रकर्मीको आँखामा बस्न सफल हुन्छन् । निरिशालाई पनि केहीले नोटिस गरेका थिए । त्यसैले चलचित्र खेल्ने अफर पनि गरे । सानै देखि फिल्मी माहौलमा हुर्केकी निरिशाको मनमा पनि अभिनयको रहर थियो । उनले पनि रुचि देखाइन । तर, केही चलचित्रको स्कृप्ट चित्त बुझेन, कुनै टिम अनि कुनैमा पारिश्रमिक । तर, अहिले सबै कुरा मिल्यो । निरिशा आफ्ना लागि उपयुक्त भुमिका, राम्रो स्कृप्ट अनि राम्रो टिम पाएका कारण ‘जानी नजानी’मा आवद्ध भएको बताउँछिन ।
‘जानी नजानी’ पहिलो चलचित्र भएकोले उनका अगाडी केही चुनौति पनि छन् । एक त भारतिय सिरियलबाट पाएको सफलता जोगाउनु, अर्को आफ्नो काम मार्फत दर्शकको मन जित्नु । पहिलो चलचित्रमा नोटिस हुन सक्छु सक्दिन भन्ने चिन्ता पनि हुन्छ । तर, विश्व बस्नेतकी छोरी भनेर हेरिने नजरले अन्य डेव्यु कलाकारको तुनलामा आफु फाष्ट नोटिस भएको उनी बताउँछिन् । जसलाई उनी प्लस प्वइन्टको रुपमा लिन्छिन् । उनलाई विश्वास छ चलचित्रले दर्शकको नजरमा पनि परिचित गराउँनेछ ।
चलचित्र ‘जानी नजानी’ लभस्टोरी चलचित्र हो । चलचित्रलाई लिएर निरिशा निकै आशाबादी देखिएकी छिन । बसन्त अधिकारी निर्देशित चलचित्रकी प्रस्तुतकर्ता रोशनी केसी हुन । चलचित्रमा निरिशाका अलवा मनिष श्रेष्ठ, सन्नि सिंह, सुमि मोक्तान, रोशनी केसी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
Know more about 'Nirisha Basnet'
Know more about Nepali Movie 'Jani Najani'
‘रेस’को ट्रेलर सार्वजनिक
मीनबहादुर भामको ‘अ इयर अफ कोल्ड’लाई ६० हजार डलर सहयोग
चलचित्र ‘कप्स’को पोष्टर सार्वजनिक
‘आप्पा स्टोरी च्यालेन्ज’ शुरु
‘दासढुंगा च्याप्टर टु’ निर्माण हुने
‘पोइ पर्‍यो काले’ निर्माणको घोषणा
New Releases (Jestha 3)
Director : Pradip Bhattarai
Casts : Barsha Raut, Dayahang Rai, Rabindra Jha, Rabindra Singh Baniya, Prakash Ghimire
Director : Milan Chams
Casts : Paul Shah, Najir Hussain, Barsha Shiwakoti, Deshbhakta Khanal, Manoj K.C.
Next Releases (Jestha 17)
Director : Samrat Sapkota
Casts : Anoop Bikram Shahi, Roshani K.C.
Director : Dipak Oli
Casts : Nisha Adhikari, Pramod Agrahari, Gaurav Pahari, Bholaraj Sapkota, Abhay Baral
Director : Madan Ghimire
Casts : Sabin Shrestha, Anu Parajuli, Ramesh Budhathoki, Ramchandra Adhikari, A. Gurung